Akụkọ - Uru nke Ceiling Grid
Uru nke ịtọkọ ite
Sistemu a na - egbochi bụ ụdị ihe eji ewu ụlọ. Site na mmepe nke ihe owuwu China, a na-eji ya n'ọtụtụ họtel, ụlọ ọdụ, ọdụ ndị njem, ọdụ ụgbọ mmiri, ebe a na-ere ihe, ụlọ ahịa, ụlọ ọfịs, ụlọ ochie, ndozigharị ụlọ, ntọala ndozi ụlọ, elu ụlọ na ebe ndị ọzọ. Light steel (breeki paini) keel bour nwere uru nke ihie dị mfe, ike dị elu, imeghari ya na mgbochi mmiri, ihe na - egbochi mmiri, ntinye uda, ntinye uda, oge udu mmiri, wdg N’otu oge ahụ, o nwekwara uru nke ime obere ihe. oge na ihe owuwu dị mfe, wdg Ihe dị iche n'etiti ọkụ nchara keel na okporo ube ụlọ bụ ihe a na -eme ka ọ dị ka igwe anaghị agba nchara, a na-etekwa mkpuchi okporo ụlọ (galvanized). Ogige mkpuchi na-ekewa na-acha uhie uhie na nke ọcha.
Etuchapu ucha onyu: Ejiri keel kpuchie ya bu mpempe ocha, nke dikwa ogologo.
Ọdịdị nke nwere ezi uche: usoro etinyebere akụ na ụba, usoro njikọ pụrụ iche. Iyi iji wụnye ma chekwaa onu ego.
Ọdịdị mara mma: A na-eji efere nchara galvanized mee elu elu nke keel ahụ, nke a na-eji ụcha mmiri.
Ojiji zuru oke: dabara adaba na nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọfịs, hotels, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ akụ na nnukwu ebe ọha na eze.
1. N'oge a na-ewu ụlọ ahụ, a ga-adọwa slabs dị ebe a na-arụ ọrụ ma ọ bụ slabs dị adị dabaa na njiri chọrọ ya, a ga-eli tupu φ6 ~ φ10 ihe eji eme ka ihe dị ike yie. Ọ bụrụ na -achọ mmebe ahụ, a ga-etinyerịrị ọnụ ụlọ ọla ahụ na - eme ka ọ dị ike dabere n'ọnọdụ nhazi nke nnukwu keels ahụ. Ọtụtụ mgbe ọ bụ 900 ~ 1200mm.
2. Mgbe kọlụm nke ụlọ ebe a na-egwute brick, a ga-etinyerịrị ya na mgbidi ya na kọlụm ahụ n'ọnọdụ elu ya. A na-ewu brik osisi mgbochi na-ebu ụzọ tupu arụ ọrụ. Oghere ahụ dị n'etiti mgbidi bụ 900 ~ 1200mm. Karịa brik abụọ.
3. Wụnye ụdị ọkpọkọ na ọkpọkọ ikuku dị n'uko ụlọ ahụ iji chọpụta ebe oriọna ahụ, ọpụpụ na oghere dị iche iche ekpughere.
4. Ngwa ihe niile dị.
5. E kwesịrị ịrụcha mgbidi ahụ na akwa mmiri tupu ụlọ arụnyere nke mkpuchi ụlọ.
6. Tọọ ntọala ebe a na-ewu ihe owuwu ụlọ.
7. Tupu a rụọ nnukwu ebe ahụ, ekwesịrị iji akwa nchara ọkpụkpụ ụlọ ahụ dị ka ụlọ ihe nlereanya, ogo nke ịbanye n’uko ụlọ, usoro nhazi nke oghere, ngọngọ na ụzọ idozi ya kwesịrị ịnwale ma kwado ya tupu nnukwu -area owuwu.